Tumira neindaneti kwatiri Enda kunotenga
Mwenje Mafashama e LED anoshandiswa zvakanyanya mumwenje wepamberi, gadheni, mativi uye dzimwe nguva dzekunze. Kusarudza imwe inokwanisa, mapoinzi pazasi anokosha zvakanyanya kune mwenje wekunze.
IP chiyero:Kufananidza yakajairika IP mwero mumusika IP65.Mvura yedu yemafashama inowirirana neIP66 iyo nekuti yedu patent dzimba dzimba dhizaini kuti ive nechokwadi chekuti haina mvura nepamusoro kupisa kupisa.
Lumen:yedu yakasarudzika yemukati neyekunze dhizaini inoita iyo mwenje lumen kushanda kupfuura 100lm / W.
Kupisa:mushure -45 ° -80 ° yakakwira & yakadzika tembiricha bvunzo, Hazvinei kuti ingashandiswa munzvimbo inodziya zvakanyanya kana inotonhora, yedu isina mvura LED mwenje inogona kunge ichishanda zvakajairika.
Munyu pfapfaidzo bvunzo:isu tinoyedza zvikamu zvese zvemafashama emunyu mumuchina wekupopera muchina maawa makumi maviri nemana apfuura, saka chero zvivakwa zvegungwa, zvichiri kushanda nemazvo.
Torque kuyedzwa:tambo yemagetsi inofanirwa kuve yakasimba zvakakwana yekumisikidza, yedu yepamusoro kupfuura IEC60598-2-1 yakajairwa 0.75 mativi emamirimita uye nemusika.
IK chiyero:Kuti uve nechokwadi chekuti mwenje nepakeji, usati & mushure mekurongedza, isu tinoisa mafashama mumushini wekushamisika wekuyedza muchina wekupedzisira maawa maviri pasi pechimhanyisa kumhanya kwe300 kuitira kuti kana vatengi vagamuchira zvinhu, zvinokodzera.
Imba yerima:yedu imwe mukana ndeyekuti isu tine yedu yerima room.Saka kune chero chirongwa, Tinogona kupa IES faira yevatengi.Pasipo, isu tine CE, RoHS, CB, zvitupa.
isapinda isingaiti:Kupa imwe yekumira sevhisi, isina mvura terminal inowanikwa zvakare.
Pasi pemakwikwi makuru akadaro, pasi pehunovimbiswa mhando, mutengo unenge uri wechimwe chinhu chikuru.Tine chivimbo chekuti mutengo wedu uchave unokwikwidza zvakanyanya pasi pemakwikwi akadaro.
Liper B II akateedzana mafashama ndiyo sarudzo yako yakanaka.
Pashure: Yakatetepa IP65 High Bay Chiedza
Zvadaro: Yakatetepa IP66 Mafashama
Cob Led Mafashama Mwenje
Mwenje Yemafashama Anotakurika
Akatungamira Mafashama Mwenje Chiedza
Mwenje Yemafashama Emvura Isina Mvura
Yakatetepa IP66 Mafashama
Inotakurika K Mafashama
BS Sensor Mafashama emagetsi
XS dzakateedzana LED Mafashama emwenje
UNE PANE MIBVUNZO PAMUSORO PEZVEDZIDZO Zvedu?
IP 65 DOWNLIGHT Yakakwana Sarudzo yeParkin ...
Simba, rudo, hushamwari kubva kumurume akanaka ...